XUSUUS-QORKAYGA GOOBTII CAYNABA 2; IYO BEENIN MAQAALKA (MAXAMED SIYAAD VS MAXAMED KAAHIN), EE UU QORAY AXMED NOUR GURUJE. –W/Qoray: Maxamuud Axmed Oday (Hawzar) Qormada 5aad.
Thursday March 08, 2018 - 19:01:17 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Maalintii saddexaad ee dagaalkaa siddeedda maalmood, sidii caadada u ahayd ciidammada SNM weerar saddex-jiho ah, oo aan hakasho lahayn ayay ku qaadeen
Maalintii saddexaad ee dagaalkaa siddeedda maalmood, sidii caadada u ahayd ciidammada SNM weerar saddex-jiho ah, oo aan hakasho lahayn ayay ku qaadeen ciidankii cadowga, oo difaac kaga jira goobihii shalay gabbalku ugu dhacay. Bilawgii weerarkaba, tawaangidiisii ayaa si xawli leh ugu soo dhaqaaqay xaggii ciidankii SNM ee weerarka ahaa. Saddexda jiho ee weerarku kaga yimiba tawaangidu way u baxday, khasaare dhimasho iyo dhaawacba lehna way noo geysteen. Khasaaraha dhimasho ee ugu badani wuxuu ku dhacayciidankii ka jeeday dhinaca galbeed, oo intuu taangigii u saaray gooddiga bari ee bankaGubad-xariir, ayuu ugu yaraan halkaa dhawr iyo toban weyn, oo ciidankii lugta ahaa ku jiidhay. In badan oo kalena, wuxuu ku jiidhay dhirtii bilcilka ahayd ee ay kaga eerteen. Canaan xoog leh ayaa intuu dagaalku socdayba lagu hayay gawaadhida ridaysa qoryaha lidka taangiga, oo ah jiibabka 106mm iyo B10-nada 82mm ah. Goor ay taangi xabbad la helaan waxaa ugu dambaysay dagaalkii Qorilugud. Laba nin oo gubay tawaangidii lagu gubay Caynaba iyo Qorilugud, midna dagaalka ma joogo. In kastoo aanan hubin, waxaa la odhan jiray waxaa loo diiday lacag loogu ballan-qaaday, oo intii aanay tawaangida gubin la yidhi, ninkii taangi ka guba cadowga, waxaa la siinayaa lacag. Ciidanka madaafiicda,teknikada kale –aanay ku jirin, hubka lidka taangigu, iyo ciidanka lugtuba, waajibkoodii sidii uu ahaa ayay uga soo baxeen, oo ay cadowga u geysteen khasaare. Maalintaa gelinkeedii dambe, jihada koonfureed iyo jihada koonfur-bari oo keliya ayaannu cadowgii ka weerarray. Isla sidii maalintii saddexaad, ayuu adkaystay difaaca, sidaana gabbalkii ayaa ku dumay.
Maalmihii afraad iyo shanaad, ee dagaalkaasi socday ciidanka SNM wuxuu ahaa weerar joogto ah, oo aannaan waxba la hadhin. In kastoo maalinta afraad, niyadda ciidanka lugtu aanay fiicnayn, sababtuna ay ahayd ragii taangigu shalay ku jiidhay bannaanka Gubad-xariir. Subax kasta oo ciidankayaguweerar galo, sidii ayuu taangigu hore ugu soo baxaa isagoo xawli sare, guux iyo cartan isku daraya. Dhawr jeer, ayaa tawaangida cadowga lagu sigay xabbadaha lidka taangiga, laakiin nasiib-xumo, midna lalama helin, waxaase laga bad-baadiyay, inuu jiidho ciidanka lugta, sidii dhacday maalintii saddexaad ee dagaalka. Maalintii afraad ama shanaad ee dagaalka, raggii teknikada dagaalka ridayay, ee dhintay waxaan ka xasuustaa AHUN Cabdi Siciid Cawaale iyo Ilka-case, oo midna ridayay Zuug saarnaa Pegaso 2 oo qaybta 1aadlahayd, midna ridayay Shiilkihii 8aad, sida ay u kala horreeyaan. Habeennimadii maalinta afraad, waxaa la soo guray maydka raggii uu taangigu ku jiidhay gooddiga banka Gubad-xariir. Maydadkii waxaanu ku aasnay tuulada Jaamac Liibaan.
Maalintii lixaad, ciidankii cadowgu sidii ayuu u filayaa in aroortana la soo weerarayo. Laakiin, taasi ma dhicine ciidankayagii wuxuu subaxaa talo ku daayay in cadowga madaafiic lagu duqeeyo, ciidankana guud ahaan dib-u-habayn lagu sameeyo. Madaafiicdan ciidankayagu isticmaalayaa, waa laba ka mid ah kuwii cadowga lagaga furtay Caynaba oo ah nooca loo yaqaanno 105mm Howitzer, iyo laba mini-BM 107mm ah, oo aan hore loo isticmaalin. Labada BM ee yar-yari, mid kastaa waa 12 dhuumood, oo gaagaaban, marka xabbaddi ka dhacdo, ololka iyo baaruudda uu dabada ka sii daayaa, waxay kicinaysaa siigo aad u weyn oo meel fog laga arki karo. Marka xabbado is-daba-joog ah laga ridona, siigadiisu way sii kordhaysaa.Cadowgu madaafiic culus buu wataa, markuu arkay siigada uu kicinayo madfaca lagu soo ridayaa, ayuu si toos ah duqayntiisii ula soo beegsaday goobtii madaafiicda laga ridayay. Nasiib wanaag, duqayntaa cadowgu waxyeello waxay keentay, dhaawac fudud oo firidho yar-yar u badan.
Maalintii toddobaad, iyadoo mooraalka ciidanku ka wanaagsan yahay maalmihii ka horreeyay ayaa sidii hore saddexdii jiho ee hore laga weeraray cadowgii. Ciidankii lugta xooggiisii waxaa loo wareejiyay dhinaca koonfur toos ah, iyo dhinaca koonfur-bari. Xagga galbeed, maadaama oo bankii Gubad-xariir xigo, weerar badani kama soo gelin. Ciidanka xagga waqooyi-galbeedna lagama soo weerar gelin karo, oo waxaa si toos ah isaga hor imanaya seeraaraada hubka ee colkan iyo colka ka soo dagaal-gelaya jihada koonfur-bari. Ciidanka cadowgu shalay ma hawl-gelin, duqayntii madaafiicda mooyaane, wuu nastay oo isaguna dib isu habeeyay. Markii subaxdii dagaalku bilaabmay, oo ciidankayagu weerar yahay, iska caabbin xoog leh ayaannu kala kulannay cadowgii. Mar kasta oo ciidankayagu ku kaco cadowga oo is-yidhaahdo jiidh dhumucda cadowgaba, intay noo jilib dhigaan, ayay iyaguna isku-deyayeen in ay na jiidhaan, annaguna markaas ayaannu u jilib-dhignaa oo aannu u diidnaa in ay tallaabo hore u soo qaadaan. Duhur bay gaadhay, ciidanku isagoo dagaalka ku jira ayaa la gaadhsiiyay qado, intii la gaadhsiin karayey. Qadadu waa hilib iyo qamadi. Sida raashinkani ku imanayo mar kale ayaan idiin soo qori, haddii allah idmo. Mar qudha iyadoo aan la kala nasan, oo ay galabnimo u wareegtay, ayuu mar qudha cadowgii doonay inuu jeexo dhumucda ciidankayaga, oo ka dhex-gudbo, sidaana uu ugu gudbo Dhoqoshey oo ahayd waajibkiisa labaad –inuu soo gubo. Ciidan gurmad kaga yimi bari, oo ka tirsan qaybtii 7aad ayaa sidii uu u rarnaa dagaalka ka soo galay dhinaca tuulada Qudhac-safar. Rag badan ayuu taangigu cagta mariyay, oo galabtaa ka dhintay ciidankii gurmadka ahaa, ee qaybtii 7aad ee SNM, qaar kalena gacanta ayaa cadowgu ku dhigay. AHUN Col. Yuusuf Cali-madoobe, oo ka tirsanaa saraakiisha hoggaanka u haysay ciidankaa gurmadka ah ee bari ka yimi, ayaan ka xusayaa ragga goobtaa ku dhintay. Sarkaal la yidhaahdo, C/laahi-naabaal-na, waxaan ka xasuyaa ragga gacanta cadowga galay, iminka wuu nool yahay oo wuxuu ka tirsan yahay ciidanaka qaranka, gaar ahaan qaybta 12aad. Dagaal ciddiyo-ku-dagaallan ah, oo la is-dhex-galay, dhimashadaa oo aan yarayn, iyo dhaawacaa marka laga tago, waxaa gacantii cadowga galay gaadhi Zuug ah (Pegaso 2), waxaa kale oo fara ciddidood kaga baxsaday Shiilkihii 1aad lahayd, oo saarnaa gaadhi maraykan GMC 6X6 ah.
Intaasii haddii ay dhacday, oo cadowgu faraxsan yahay ayaa ciidankii madaafiicdu is qaybiyay. Madfac 105mm ah ayaa deg-deg loo soo xidhiidhiyay, tuulada Libaaxle balli yar oo ka bariyeeya, oo goobtan cadowgu marayo ka xiga xagga galbeed ayaa madficii qaab-dagaal loo dhigay. Laba sarkaal, oo goobta marayey, mid wuxuu fuulay gaadhiga madfaca jiidayay dhigihiisa halka ugu sarraysa, waa gaadhi UD 8 tonner ah, midabkiisu waa buluug, ninkii lahaa -Siciid-guray, ayaa gacantiisa ku wada. Halkaa ayaa duqayn toos ah oo aan kala go’ lahayn loogu geystay cadowgii. Muddo kooban, ayuu gaadhigii ay qabsadeen inta ay xidhiidhsadeen, cagaha wax ka dayeen, oo dib ugu noqdeen fadhiisinkoodii, oo Beeli-eedday ah. Maalintaasi, cadowga guul bay u ahayd, maxaa yeelay, wuxuu gacanta ku dhigay gaadhi tenkiko ah oo isku dhamays-tiran. Gabbalkii ayaa sidaa ku dumay. Dhoqoshay, waa laga qaxay, oo habeenkaa dadka in baan u soo hoyan. Cadowgiina, fadhiisinkiisii ayuu ku noqday. Habeenkaasi wuxuu ahaa habeen murugo u leh ciidankii SNM ee dagaalka ku jiray toddobada maalmood iyo daweynihii taageerayayba.
Waagu markuu beryay, oo ciidankii SNM ku tashaday in sahan la dirto dagaalka hortii, ayaa cadowgii markanna si lama filaan ah u guuray. Wuxuu ka baxay waddada marta Xaskul, ee dusha kaga dhacda Qoryaale. Raacdo, ka kooban saddex gaadhi oo tekniko fudud ah, hal madfac oo uu jiidayo gaadhi UD 4X4 uu lahaa AHUN Axmed-meged, ayaa ka daba tegay, si ay cadowga jabay hilbo uga reebaan. Nasiib xumo, gaadhigii UD ahaa ee madfaca jiidayay ayaa hobo u baxay. Halkaa ayaa raacdadii ku hakatay, cadowgiina u geddoomay Burco, iyo dhulkii uu haystay. Intii dagaalkaasi socday, cadowga wax gurmad ahi uma iman. Annagana gurmadka keliya ee noo yimi wuxuu ka yimi qaybtii 7aad ee SNM
La soco Qormada 6aad. Weerarkayagii Oodweyne; Gubistii Harada-gubataxil; Geeridii AHUN Col. Aadan Saleebaan iyo G/le Cabdi C/laahi.
Mohamoud Ahmed Oday (MBA)